Xukunka Ugu Dambeeya, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
«Saxanka ayaa imanaya! Xukunka ayaa imanaya! Toobad keena imminka, ama waxaad geli doontaa cadaabta ». Waxaa laga yaabaa inaad maqashay qaar wacdiyayaal ah oo wareegaya oo qaylinaya ereyadan isku dayaya inay dadka ka cabsiiyaan inay galaan ballanqaad Masiixa. Ama, waxaad u aragtay inuu qof noocan oo kale ah ku dhex jiifayo filimo leh muuqaal muuqata. Laga yaabee in tani aysan ka fogeyn muuqaalka "xukun daa'im ah" oo masiixiyiin badani rumaysteen qarniyo badan, gaar ahaan qarniyadii dhexe. Waxaad ka heli kartaa sawirro iyo sawirro muujinaya kuwa xaqa ah oo jannada u qulqulaya si ay ula kulmaan Masiixa iyo kuwa aan xaqa ahayn ee cadaabta lagu jiiday. Sawiradaan Xukunka Ugu Dambeeya, xukunkii masiibada weligeed ah, waxay ka timid bayaanno Axdiga Cusubi ku saabsan isla kan. Xukunka ugu dambeeya waa qayb ka mid ah baridda "waxyaalaha ugu dambeeya" - soo noqoshada mustaqbalka ee Ciise Masiix, sarakicidda kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn, dhammaadka dunidan sharka leh, oo lagu beddeli doono boqortooyada Ilaah ee sharafta leh.
Baybalku wuxuu cadeynayaa in xukunku yahay dhacdo halis ah dhamaan dadka ku noolaa sida ereyada Ciise cadeeyo: «Laakiin waxaan idinku leeyahay maalinta qiyaame, dadku waa inay ku xisaabtamaan eray walba oo aysan adeegsan. inay lahaadaan. Erayadaada ayaa lagaaga xaq siin doonaa, oo hadalladaagana waa lagugu xukumi doonaa. (Matayos 12,36: 37). Ereyga Griigga ah ee "xukun" ee lagu adeegsaday aayadaha Axdiga Cusub waa khalad, kaas oo ereyga "xiisadda" laga soo qaatay. Qalalaasaha waxaa loola jeedaa waqti iyo xaalad marka go'aan loo gaarayo ama looga soo horjeedo qof. Dareenkan, qalalaasaha ayaa ah barta qofka noloshiisa ama adduunkaba. Kirisi wuxuu si gaar ah u tilmaamayaa waxqabadka Eebbe ama Masiixa inuu yahay garsooraha adduunka ee loogu yeero xukunka ugu dambeeya ama maalinta xukunka, ama waxaan dhihi karnaa bilowga "xukun daa'im ah".
Ciise wuxuu ku soo koobayaa xukunka mustaqbalka ee qaddiyada kuwa xaqa ah iyo kuwa sharka ah sida soo socota: “Ha ka yaabin arrintan. Waayo, saacaddu waa iman doontaa markii kuwa xabaalaha ku jiraa dhammaantood ay codkiisa maqli doonaan, oo waxaa soo bixi doona kuwa wanaagga falay, iyo sarakicidda nolosha, laakiin kuwa sharka fala, iyo sarakicidda xukunka, (Yooxanaa 5,28).
Ciise wuxuu sidoo kale ku sharaxay nooca xukunka ugu dambeeya qaab muuqaaleed sida adhiga oo ka kala soocaya yeyda: “Laakiin goortii Wiilka Aadanahu ammaantiisa ku yimaado, isaga iyo malaa'igaha oo dhan isaga, wuxuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa quruumaha oo dhan iyo quruumaha oo dhan. waxaa lagu soo ururin doonaa hortiisa. Oo wuxuu u kala sooci doonaa sida adhijir adhiga u kala sooci doona riyaha, oo wuxuu soo saari doonaa midigtiisa, riyahana bidixdiisa. (Matayos 25,31: 33).
Idaha midigtiisa midig waxaa lagu ogeysiinayaa barakotooda ereyadan soo socda: "Kaalay, aabbahay barakeeyey, dhaxla boqortooyadii adiga laguu diyaariyey tan iyo bilowgii dunida!" (V. 34). Riyaha bidix waxaa sidoo kale loo sheegaa mustaqbalkooda: "Ka dib wuxuu markaas ku odhan doonaa kuwa bidixdiisa, 'Meeshaad ka habaaran ,ow, in dabka weligiis ah loo diyaarshay shaydaanka iyo malaa'igihiisa." (V. 41).
Muuqaalka labada koox waxay siineysaa kan xaqa ah kalsoonida waxayna ku riixeysaa kuwa xun xun waqti qalalaase gaar ah leh: «Rabbigu waa ogyahay sida kuwa badbaadada leh looga badbaadiyo jirrabaadda, laakiin inuu u hayo kuwa aan xaqa ahayn maalinta ciqaabta si uu u ciqaabo» (2 Butros 2,9).
Bawlos sidoo kale wuxuu ka hadlayaa maalintan labalaab ee xukunka, isaga oo ugu yeeraa "maalinta cadhada markii xukunkiisa garsooriddiisa la muujin doono" (Rooma 2,5). Wuxuu yidhi: «Eebbe, oo nin walba siin doona wax walba sida shuqulkiisu yahay, nolosha weligeed ah ee kuwa dulqaadashada leh, oo si wanaagsan ugu dadaalaya ammaanta, sharafta iyo nolosha aan dhiman karin; Ceeb iyo xanaaq, si kastaba ha noqotee, kuwa muran badan oo runta diidaa, laakiinse u hoggaansama caddaalad darrada » (Aayadaha 6aad).
Qeybaha kitaabiga ah ee noocan ah waxay ku macneeyaan caqiidada xukunka weligiis ah ama xukunkiisa ugu dambeeya si sahlan. Waa xaalad ama xaalad; waxaa ku soo furtay Masiixa iyo kuwa xunxun ee lumay. Qaybo kale oo badan oo ka mid ah Axdiga Cusub ayaa ku tilmaamaya “Xukunka Ugu Dambeeya” waqti iyo xaalad aan cidina baxsan karin. Waxaa laga yaabaa inay sida ugu fiican ee dhadhaminta looga helo wakhtigan mustaqbalka waa inaad soo xigato dhowr qaybood oo ay xusid mudan tahay.
Waraaqda Cibraaniyadu waxay ka hadlaysaa xukunka sida xaalad qalalaase oo qof walba wajihi doono. Kuwa Masiixa ku jira, ee lagu badbaadiyay shaqadiisa madax furashada, waxay heli doonaan ajarkooda: «iyo sida dadku ugu talo galay inay mar dhintaan, laakiin xukunka kadib: sidaas oo kale Masiixu wuxuu mar allabari u bixiyey inuu qaado dembiyada kuwa badan; mar labaad uma soo muuqan doono dembi aawadiis, laakiin wuxuu u soo muuqan doonaa badbaado kuwa isaga sugaya » (Cibraaniyada 9,27: 28).
Dadka la soo badbaadiyey ee lagu caddeeyey shaqadiisa furasho uma baahna inay ka cabsadaan xukunka ugu dambeeya. Johannes wuxuu u xaqiijinayaa akhristayaashiisa: “Halkaan waa meesha aan ku jecel nahay, inaan kalsooni ku qabno maalinta xukunka; maxaa yeelay, siduu isagu yahay, innaguna dunidan ayaynu ku nahay. Cabsidu kuma jirto jacaylka » (1 Yooxanaa 4,17). Kuwa ku jira Masiixa waxay heli doonaan ajarkooda weligiis ah. Kuwa cibaadalaawayaasha ah ayaa xumaan doona. "Marka jannada hadda iyo dhulku ku badbaado isla ereyga dabka, loo badbaadiyey maalinta xukunka iyo xukunka dadka cibaadalaawayaasha ah" (2 Butros 3,7).
Bayaankayagu wuxuu leeyahay "xagga Masiixa Sayidku wuxuu qof walba siiyaa naxariis iyo caddaalad, oo ay ku jiraan kuwa sida muuqata aan rumeynin injiilka markay dhintaan." Ma dhihi karno sida Eebbe u siinayo bixinta noocan ah, marka laga reebo in wax kasta oo ay tahayba, ay tahay bixinta noocan ah oo suurto gal ah iyada oo loo marayo shaqada badbaadada Masiixa, sida ay tahayna kuwii horeba u badbaaday.
Ciise qudhiisa ayaa meelo badan ka muujiyey intii uu ku gudajiray hawshiisa dhulka in daryeelka loo qaado kuwa aan la wacdiyin, in ay fursad u leeyihiin in la badbaadiyo. Wuxuu sameeyey sidaas oo uu ku dhawaaqayo in dadka magaalooyinka qaar qadiimiga ah ay raalli ka yihiin maxkamad marka loo eego magaalooyinka Yuudas oo uu ku wacdiyey:
Waa kuu hoog, Chorazin. Waa kuu hoog, Beytsayday! Laakiin Turos iyo Siidoon waa idinka kaaga aqbali doonaan maxkamadda (Luukos 10,13-14). «Dadka Nineweh waxay u soo muuqan doonaan Xukunka Ugu Dambeeya ee jinsi ahaantaana way xukumi doonaan. Boqoradda Koonfurta [oo u timid inay dhegeysato Sulaymaan] waxay ka soo muuqan doontaa xukunka ugu dambeeya ee jinsiyeed wayna xukumi doontaa » (Matayos 12,41: 42). Halkan waxaa ah dadka ka yimid magaalooyinkii hore - Turos, Siidoon, Nineveh - kuwaas oo sida muuqata aan fursad u helin inay maqlaan injiilka ama ay ogaadaan shaqada badbaadada Masiixa. Laakiin waxay u arkaan in xukunku yahay mid u sahlan, oo si fudud iyagoo hor taagan Badbaadiyahooda, waxay fariin xun u diraan kuwa diida noloshan.
Ciise sidoo kale wuxuu sameeyey bayaan naxdin leh in magaalooyinkii hore ee Sodom iyo Gomora - maahmaahdii wixii falxun weyn ka dhacay - ay xukunkii ka heli lahaayeen magaalooyin ka baxsan Yahuudiya oo Ciise wax ku baray. Si aan uga dhigno macnaha guud siduu u baqayo hadalka Ciise, bal aan eegno sida Yuudas u muujinayo dembiga labadan magaalo iyo cawaaqibka noloshooda ku yeeshay camalkooda:
Xukunka maalinta weyn, wuxuu sidoo kale qabtay malaggii, kuwaasoo aan dhawrin darajadoodii jannada, laakiin ka tegay rugtoodii, iyagoo xidhxidhan weligood ku dhex jira. Sidaas oo ah Sodom iyo Gomora iyo magaalooyinkii kale oo ku wareegsanaa, oo iyagu sidii ikhtiyaarkooda u quudhsaday oo eryanaya hilib kale, ayaa tusaale ahaan loo dejiyey oo loo ciqaabayaa ciqaabta dabka weligiis ah (Yuudas 6-7).
Laakiin Ciise wuxuu ka sheegayaa magaalooyinka xukunka mustaqbalka. Runtii, runtii waxaan idinku leeyahay, Sodom iyo Gomora waa ka xisaab fududaan maalinta xisaabta magaaladan (tanuna waa magaalooyinkii xertii ayan aqbalin) (Matayos 10,15).
Runtii, kani waa waxa waxyaabihii u dambeeyay ay ku saabsan yihiin, oo ay ku jiraan Xukunka Ugu Dambeeya ama Xukunka Waligiis ah: Guusha Ilaaha jacaylka ah ee ka sarreeya wax kasta oo u taagan dariiqa nimcadiisa weligeed ah. Sidaa awgeed Rasuul Bawlos wuxuu yiri: «Tan dabadeedna ugudambeeya markuu isagu boqortooyada u dhiibo Ilaaha Aabbaha ah, ka dib markuu wada baabbi'iyey xukunka oo dhan iyo xooggii iyo rabshadiiba. Maxaa yeelay, isagu waa inuu xukumo ilaa Ilaahay cadaawayaashiisa cagihiisa hoostooda geliyo. Cadowga ugu dambeeya ee la baabba'o waa dhimasho » (1 Korintos 15,24: 26).
Ciddii noqon doonta xukunka ugu dambeeya garsoora kuwa kuwii xaq ka dhigay Masiixa iyo kuwa weli dembiilayaal ah maahan Ciise Masiix oo naftiisa u huray madax furasho dadka oo dhan. Ciise wuxuu yidhi, Aabbuhu ninna ma xukumo, laakiin xukunka oo dhan wuxuu ku wareejiyey wiilka. (Yooxanaa 5,22).
Kan xukumaa kan xaqa ah, aan wacdiyin iyo xitaa kuwa sharka leh ayaa ah kan naftiisa u soo bixiyey si kuwa kale ay weligood noolaadaan. Ciise Masiix wuxuu horey u xukumay dembiga iyo dembiga. Tan macnaheedu maahan in kuwa diida Masiixa ay ka fogaan karaan dhibaatada ay go aankooda ku gaari doonaan. Waxa muuqaalka garsoorka naxariista leh, Ciise Masiix, uu inoo sheegay inuu isagu doonayo in dadka oo dhami ay helaan nolosha weligeed ah - oo uu u bixin doono kuwa isaga isku halleeya.
Kuwa loogu yeedhay Masiixa - oo loogu xushay doorashadii Masiixa - waxay wajihi karaan xukun kalsooni iyo farxad, iyagoo og in badbaadadooda uu ku badbaado isaga. Kuwa aan la wacdiyin - kuwa aan fursad u helin inay maqlaan injiilka oo ay ku kalsoonaadaan Masiixa - waxay sidoo kale ogaan doonaan in Sayidku u diyaarsaday iyaga. Xukunku waa inuu u noqdaa waqti farxad u leh qofkasta, maadaama ay ku soo qaadan doonto ammaanta boqortooyadii daa'imka ahayd ee Ilaah oo aan wanaag lagaheyn doonin weligeedba.